Ciidamo katirsanaa Somaliland oo isku soo dhiibay Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamo katirsanaa Somaliland oo isku soo dhiibay Puntland
February 12, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Ciidamada isa soo dhiibay ayaa gaaraya 160 askari. [Sawirka: PLTV]
Garowe-(Puntland Mirror) Ciidamo gaaraya 160 askari oo katirsanaa maamulka Somaliland ayaa isku soo dhiibay Puntland, sida uu baahiyay taleefishinka dowladda Puntland ee PLTV Axadii.
Ciidamada ayaa ku sugnaa deegaanka Caroweyn ee gobolka Ceyn, sida uu PLTV sheegay.
Xildhibaano katirsan Puntland oo joogay goobta ciidamadda lagu soo bandhigay, ayaa soo dhaweeyay ciidamadda isa soo dhiibay, waxayna balanqaadeen in xuquuqdooda ay ka heli doonaan Puntland.
Tilaabadaan ayaa imaanaysa iyada oo todobaadyadii lasoo dhaafay ciidamo katirsan Puntland iyo Somaliland ay isku hor fadhiyaan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, uuna dagaal ka dhex qarxi karo wakhti kasta.
BoosaasoGaroowe-(Puntland Mirror) Markab sida xoolo dhan 3990 ido iyo riyo ah ayaa xalay ka baxay dekada Boosaaso waxaana uu aaday dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, sida wasaaradda dekadaha Puntland ay ku sheegtay bayaan ay soo dhigtay [...]
Singapore-(Puntland Mirror) Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo xafiiska fadhiya iyo hoggaamiyihii Waqooyiga Kuuriya ah oo kulma kadib muddo sanad ah oo ay is-dhaafsanayeen hanjabaadyo. Labada masuul [...]